Mootummaa Kuubaa ummata isaa saamuu dhowwuu
U.S. akka bulchiinsii abbaa irree kuubaa mootummaa Venzezuheelaa Nikolas Maduuroo seera malee biya bulchuutti jiru gargaaruuf jedhee horii ummata isaa hin saamen dhowwuutti jirti
Mootummaan biyya sunii akka hamaamaa lamaan maallaqa harkatti deebifachuuf saamuutti jira.
Yoo namii Kuubaa ka biyya alaa jiru nama ufiiti ergu keessaa hata.Biyyoota moggaa lafa Kuubaan qubattu keessa jiran keessaa waraana Kuubaa qofatti horii nama biyya alaatii firaa ergu keessaa hata,jedha Amerikaatti itti aanaan ministera haajaa alaa addunyaa biyyoota Gama Dhiyaa Ambassador Michael Kozak yoo dhiyoo tana kora rakkoo Kuubaa irratti taa’e irrati wa dubbate.
“Waraanii Kuubaa horii kana waan guurratuuf qaba, dhimma venezuehlaa ka itti seene kasaareen kana irratti ufiin gargaara.Waan kutatu kutatee waan hafe ammoo akka ummatii suuqilee mootummaatii wa bitatu tolchaan jedha ambaasaadder Kozaak
US amala Kuubaa kana dhaabuuf jettee karaan karaa kuubaan horii alaa dhufu kanaan argattu dhaabuutti jirti.Akka ummtii hori kana karuma ufiitiin ergattu tolchite.
US tana maleellee karaa lammeessoo mootummaa Kaasitroo maallaqan tuulatu addunyaatti himte.
Mootummaa Kuubaa ogeeyyota fayyaa biyya isaa addunyaa keessa yaa’anii namaan wallaan irraa horii guurrata. Kun karaa lammeessoo.Karaan guddaan mootummaan Kaastiroo horiin argatuu karaa jedha ambaasaadder Kozaak.
Warra akkana wallaansaaf mootummaan isaa biyya alaatti erga kana irraa mootummaa Kaastiroo horii warrii argatu harka 90 irraa guurrata.
Doktorootii kun hinuma hojjatanii taatullee horii sun ilaaluu hin argan jedha jedha ambaasaadder Kozaak.
“Biyyootii hojjattotoii kuubaa keessa jiran mindaa hojjatooota sunii baankii mootummaa abbaa irraa kuubaatti naquu dhiisanii baankuma ufiitti galchan.
“Akka mootummaan abbaa irree kaastiroo kun horii kana hin arganne dhimma Venezuhlatiif baasu karaa gara garaatiin dinne.
Waraana kuubaa irraa horii qabuu ,warra mootummaa sunii nagaa eeguu fi dhaabbilee basaasa isaanii irraa horii kutaan adabmane jedha ambaasaadder Kozkiin.
Hujii ummata Kuubaa jajjabeessuu feena malee mootummaa abbaa irraa jabeessuu hin feenu jedha,ambaasaadder Kozokiin.